Tanora Haisiana-Dominikana Mitaky Hanan-Jò Ara-Dalàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2013 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, македонски, Français, Español
Tanora Dominikana lahy sy vavy manana fiaviana Haisiana manodidina ny 50 eo ho eo no nanomana tao amin'ny Movimiento Reconoci.do [es], diabe niainga avy tao amin'ny Katedralin'i San Pedro de Macorís Cathedral mankany amin'ny Lapa Nasionaly tao Santo Domingo mitaky ny hamerenana ny antonta-taratasiny, sy ny zom-pirenena maha-Dominikana, izay nesorina tsotra izao tamin'ny alalan'ny lalàm-panjakana -R12- navoakan'ny Foiben'ny Vaomieram-Pifidianana (JCE) tamin'ny 2007.
Ampangain'ny mpanao diabe ny fihoara-pahefana sy ny tsy firaharahian'ny JCE, izay mitady ny handefa lisitra eo anelanelan'ny 19.000 ka hatramin'ny 22.000 any amin'ny Departemantan'ny Fifindra-monina (DGM), manaisotra azy ireo tsy misy fierana ao amin'ny rejisitra sivily ka mamindra azy ireo ao amin'ny bokin'ny mpifindra monina tsy misy famotopotorana.
Ao amin'ny lahatsoratra, “Firenena Manimba Tena” [es], navoakany ao amin'ny bilaoginy, ny mpikatroka sosialy Gloria Amézquita no miteny:
Ny tsy fanomezana antonta-taratasy ny mponina Dominikana manana fiaviana Haisiana no manamafy ny kileman'ny fanjakana Dominikana eo amin'ny sehatry ny zo hanana anarana sy zom-pirenena.
Mpanohana maro no niara-nampiasa ny paingoteny #LevantaTuVoz [es] (#AsandratoNyFeonao) ao amin'ny Twitter sy niezaka tsy nitsaha-nitatitra ny hetsika tamin'ny alalan'ny kaonty ofisialy @Reconoci_do.
Niainga tamin'ny valo ora maraina avy eo San Pedro de Macorís ny diabe rehefa avy nanaovan'i mompera Luis Antonio rano, mpitondra fivavahan'ny Katedralin'i
manao hetsi-panoherana hiarovana ny zony ireo tanora Dominikana manana razambe Haisiana. nahazoana alalana.
San Pablo Apóstol, fitsofan-drano ka nanavatsava an'i Santo Domingo tamin'ny zoma 12 Avrily ka nizorany hankany ami lapam-panjakana, izay nitakian'ireo tanora tratran'ny fanesorana ny anarany ao amin'ny rejisitra fanambarana avy amin'ny filoha Danilo Medina, izay filoha voalohany ao amin'io firenena io nilaza nandritra ny fampielezan-kevitra nialoha ny nifidianana azy fa hataony lahara-pahamehana ao amin'ny programan'asany ny olan'ireo Dominikana manana fiaviana Haisiana.
Nanao antso tamin'ny hetsika sosialy, fiangonana, sendikà, artista, politisiana, atleta ary ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny ny tanora mba hiara-dia amin'izy ireo amin'ny diabe: “Ny fanajana ny zonay no antoka fa hajaina ny zon'ny rehetra. Tokony averin'ny JCE ny “antonta-taratasinay noraofina,” hoy ny mpikarakara.
Nambenan'ny polisy sy narahin'ny ambilansy, izay toy ny miendrika fanohanana, ry zareo nandritra ny diabe.
Minisitra lefitry ny Presidansa Henry Molina nandray ny antonta-taratasy. nahazoana alalana.